Movavi: म्याक र विन्डोज को लागी सबै भन्दा राम्रो भिडियो र फोटो संपादक ग्याजेट समाचार
Movavi: विन्डोज र म्याक को लागी सबैभन्दा पूर्ण फोटो र भिडियो सम्पादकहरू
ईडर एस्टेबान | | छवि र ध्वनी, सफ्टवेयर
को गृहकार्य फोटो र भिडियो सम्पादन धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि जटिल हुन सक्छ। थप रूपमा कहिलेकाँही हामी फेला पार्दछौं कि बजारमा धेरै सम्पादकहरूले हामीलाई प्रयोग गर्न चाहेका सबै विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दैनन्। त्यसोभए हामी चाहेको सम्पादन प्रकार पूरा गर्न सक्दैनौं। भाग्यवस, यो समस्या मोभवीको साथ विगतको चीज हो।
कम्पनीले सफ्टवेयर सिर्जना गर्दछ जसले हामीलाई विन्डोज र म्याकमा फोटोहरू र भिडियोहरू सम्पादन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। ती उत्पादनहरूका बीचमा हामी फेला पार्दछौं मोभावी फोटो सम्पादक। हामीसँग मार्केटमा सबैभन्दा व्यापक भिडियो सम्पादकहरू मध्ये एक छ, मोभाभी भिडियो सम्पादक।
कम्पनीले हामीलाई प्रदान गर्ने कुरामा केन्द्रित छ गुणस्तरीय सफ्टवेयर व्यावासायिक सम्पादन कार्य पूरा गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै उपकरणहरू उपलब्ध छन्। यस तरीकाले, तपाईले छवि वा भिडियो सम्पादन गर्ने क्रममा नतिजा प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहुन्थ्यो। हामी तल प्रत्येक उत्पादनको बारेमा बढी कुरा गर्नेछौं। त्यसोभए, तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ कि मोभावीले के प्रस्ताव राख्छ।
1 Movavi भिडियो सम्पादक / भिडियो सुइट
2 मोभावी फोटो सम्पादक
Movavi भिडियो सम्पादक / भिडियो सुइट
यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने भिडियोहरू वा चलचित्रहरू पेशेवर सम्पादन गर्न सक्षम हुनुहोस्, त्यसो भए यो उत्तम विकल्प हो जुन हामी आज फेला पार्न सक्छौं। भिडियो सुइटलाई धन्यवाद हामी एकल सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण सम्पादन प्रक्रिया पूरा गर्न सक्षम हुनेछौं। त्यसो भए तपाईको कम्प्युटरमा ठाउँ बचत गर्नुका साथै यो एक पूर्ण उपकरण हो जुन तपाइँलाई चाहिएको कुरा प्रस्ताव गर्दछ.
तपाइँले यसलाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ क्लासिक भिडियो सम्पादन कार्यहरू। टुक्रा काट्ने, प्रभाव थप्न, छवि सुधार गर्ने, अडियो वा छवि सम्पादन गर्न वा केहि क्षण क्याप्चर गर्नबाट। यी कार्यहरू र अन्य धेरैका साथै, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ भिडियोलाई अन्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस्। तपाइँसँग काम गर्ने टोलीसँग मिल्दो किसिमले वा अरू कसैलाई पठाउन।
यो मोभावी सम्पादकको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा हो विन्डोज र म्याक दुबैसँग उपयुक्त छ। त्यसकारण, जेसुकै तपाइँको कम्प्युटर छैन, तपाइँ यो सफ्टवेयरको मजा लिन सक्नुहुनेछ जुन तपाइँलाई तपाइँको भिडियो र चलचित्रहरू एक पेशेवर तरीकाले सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं कम्पनीको वेबसाइटमा सम्पादकको बारेमा अधिक जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
मोभावी फोटो सम्पादक
कम्पनीले हामीलाई बिभिन्न छवि सम्पादकहरू पनि प्रदान गर्दछ। त्यसोभए तपाईलाई गर्नु पर्ने संस्करण वा तपाईको पेशाको आधारमा तपाईलाई चाहिने चीजसँग मिल्दो फेला पार्न सजीलो हुन्छ। यद्यपि, एक बाँकी भन्दा बाहिर खडा एक मोभावी फोटो सम्पादक हो.
धेरै प्रयोगकर्ताहरू विचार गर्छन् कि यो केहि संतृप्त क्षेत्र हो र त्यहाँ त्यहाँ धेरै प्रकाशकहरू छन्। तर कहिलेकाँही ती प्रयोग गर्न धेरै नै जटिल हुन्छन् वा धेरै नै आधारभूत हुन्छन् र हामीलाई सबै प्रकार्यहरू प्रस्ताव गर्दैनौं जुन हामी प्रयोग गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं। भाग्यवस, यो Movavi फोटो सम्पादक जस्तै विकल्पहरूले हामीलाई मद्दत गर्दछ.
यो एक छवि सम्पादक हो जुन प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। व्यक्तिगत रूपमा, जब म छवि सम्पादनको लागि आउँदछु म विज्ञ हैन र मैले प्रयोग गर्न सहज पाएँ। इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्नका साथै। यसले हामीलाई क्लासिक सम्पादन कार्यहरू पूरा गर्न अनुमति दिन्छ (काट्नुहोस्, घुमाउनुहोस्, पुनःआकार ...)। तर पनि हामीसँग धेरै अतिरिक्त कार्यहरू छन्.
पोडेमोस प्रभावहरू थप्नुहोस्, फोटोबाट अनावश्यक वस्तुहरू हटाउनुहोस्, व्यक्तिको छाला सुधार गर्नुहोस् (पिम्पल्स, स्पटहरू, ब्ल्याकहेड्स हटाउनुहोस् ...), फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्, छवि पृष्ठभूमि बदल्नुहोस्, पाठ, आदि थप्नुहोस्। संक्षेपमा, धेरै अतिरिक्त प्रकार्यहरू जुन यसलाई धेरै पूर्ण छवि सम्पादक बनाउँदछ।
यो मोवावीबाट फोटो वा भिडियो सम्पादकमा रुचि छ? दुबै सम्पादकहरू र अधिक धेरै मोभवीको आफ्नै वेबसाइटमा उपलब्ध छन्। यसमा तपाइँले विन्डोज वा म्याक दुबैका लागि उपलब्ध भिडियोहरू वा छविहरू सम्पादन गर्नका लागि उनीहरूसँग भएको सबै सफ्टवेयर फेला पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो सजिलो छ तपाईको आवश्यकतालाई सुहाउँदो फेला पार्नुहोस्. तपाईं यी सम्पादकहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » छवि र ध्वनी » Movavi: विन्डोज र म्याक को लागी सबैभन्दा पूर्ण फोटो र भिडियो सम्पादकहरू
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 बनाम सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9
Movistar Home र Vodafone V-Home, हामी नयाँ जडित घर सेवाहरू तुलना गर्छौं